Qhagamshela uMhlaba oBonakalayo ngeArcGIS 9.3 -Geofumadas
NgoJulayi, 2008 ArcGIS-ESRI, Ehlabathini elungileyo
Ukuba iMicrosoft ifuna ukuzimisela malunga nehlabathi le-geospatial kwaye ifumane umhlaba kuGoogle, kufuneka ibambisane neenkampani ezikhethekileyo zesoftware kwaye iyenze ibe "ngobuchule ngakumbi." Oku kwenzekile kwimeko yakhe qalisa of TrueSpace ukugculela i-Sketchup!, ngoku kunye nesivumelwano ne-ESRI, ifuna ukufikelela kubasebenzisi beenkampani eziphezulu kwiimarike ze-geospatial.
Ukusuka kwi-ArcMap kunye ne-Arc Explorer. Kuyenzeka ukuba uqhagamshele kwimifanekiso ebonakalayo yoMhlaba eya kuthi ngoku ikhathalogu yenkonzo ekwi-Intanethi. Kuyenzeka ukuba wenze zombini umfanekiso kunye neemephu zesitalato kunye nenkonzo ye-hybrid. Kude kube ngoku kuphela komntu owenze le nto ... kwaye simahla sasikho asibonise.
Ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukukwenza kunye ne-9.3 version kwaye kuphela kwi-Desktop ye-ArcGIS kunye ne-ArcExplorer, nangona kubonakala ukuba unokwenza into yokushicilela kodwa kufuneka qhagamshelana nge Livemaps mara; Ukuba ukhumbula Arc2Earth wenza i-pirouettes ngayo.
Kwakhiwe kwakhona ulawulo I-ASP.NET evumela ukuba idibanise iinkonzo zeNkcazo zomhlaba ngezicelo eziphuhliswe nge-Visual Studio 2008 kunye ne-Visual Web Developer 2008.
Akukho nto ikhululekile
Ewe akusimahla, indleko ngama- $ 200 ngonyaka ngomsebenzisi ngamnye onokuthi athetheleleke kwiziko eliwasebenzisayo. Eli xabiso "kukujonga" kuphela ngezixhobo ze-desktop, ukuzisebenzisa kwiinkonzo ze-IMS, kufuneka libe lelinye ixabiso. Kwaye nangona uninzi lunokugxeka ukuba kuMhlaba oBonakalayo akukho mfanekiso unesisombululo esiphakamileyo sezixeko "ezingekho gringo", i ukuhlaziywa kokugqibela Kubonisa ukuba iMicrosoft inzulu kakhulu.
Isinyathelo esilandelayo ngokuqinisekileyo senze okufanayo nge-AutoDesk, esinokuvuya ngayo abaninzi kunye ne-Google iza kuhlala ephuthumayo ukuzikhulula ngokwabo kwizixhobo zokuvula izicelo.
Ukuba ndingumMicrosoft, ndiza kunika iifumaneka kwiinyanga ezimbalwa, ngoko kuya kwenza ukuba umlutha, mhlawumbi isinyathelo esinjengoku sigcinelwe inkomfa ezayo ... kuba silahlekelwa isimemezelo esifana nale nto ngaphambi komcimbi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-XNUMX kunye neetekhnoloji zayo "ezivelayo" zemifanekiso ye-radar
Post Next Udliwano-ndlebe noJack DangermondOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Dibanisa uMhlaba oBonakalayo ngeArcGIS 9.3"
Molo, ndiyithandile ibhlog yakho kwaye ndiyathemba ukuba sinokwabelana ngekhonkco
http://www.ficunfv.com Nje ukuba undidibanise ndithumele umyalezo wokuba ndiza kukudibanisa ngokukhawuleza kumkhombandlela wam kwaye ke siya kuthi sizuze xa ninobabini ukuba niyakhathala siza kuba sijongana